ဘတ်စ်ကား | Holmbygden.se
Holmes နှင့် Sundsvall အကြား switch
လိုင်း 28 Sundsvall – Holmes
လိုင်း 30 Sundsvall – Liden
လိုင်း 133 Sundsvall – မြင့်မားသောပင်လယ်…
အခွားသူမြားစှာကဲ့သို့ Holmes-Sundsvall အကြားအခက်အခဲဖို့စဉ်းစားနေ? သငျသညျကားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်သွားရရှိမရှိအသွားအပြန်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ကျေးလက်ဒေသများရှိအနိမ့်အိမ်ရာများကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်လျော်ကြေးငွေ. ကိုက်ညီသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နေသွားပါ, သငျသညျမြားကိုလညျးမောင်းနှင်မှုနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်ဆံနှစ်ဦးစလုံးကိုကယျတငျနိုငျ.
လိုင်း 28 Sundsvall – Holmes (ဗိုက်ကင်း)
ဤနေရာတွင် Dintur အပေါ် PDF ကို format နဲ့သို့မဟုတ် search function များအားအားဖြင့် Holmes ဘတ်စ်ကားကိုကြည့်ပါ,ဖြစ်.
OBS! အဆိုပါလမ်းကြောင်း Sundsvall-Kovland တစ်ခါတစ်ရံလိုင်းကတဆင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆည်း 30, ကြိမ်ကြည့်ရှု နောက်ထပ်ဆင်း.
ခရီးစဉ် Holmes-Sundsvall ဘယ်လောက်မ (50 ကီလိုမီတာ)?
သို့မဟုတ်နှင့်အတူအငြိမ်းစားအဖြစ် 100% Buy ဖို့အနာရောဂါ / လှုပ်ရှားမှု “Seniorkortet” နှင့်ကလေးများ 0-19 Buy မှတစ်နှစ်လျှင် “ကလေးတွေကဒ်” သာဘို့ Sundsvall ၏မြို့တော်စည်ပင်ကတစ်လျှောက်လုံးန့်အသတ်ခရီးသွား 100 SEK / လ.
အခွားသောစျေးနှုန်းများ Dintur.se အပေါ်ကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက အဆိုပါခရိုင်က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာတွင်တွေ့ရှိ – dintur.se
ကျောင်းစာအုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ ဤနေရာတွင် Sundsvall မြို့တော်စည်ပင်ကက်ဘ်ဆိုက်မှာ.
Träpatronenပို့ဆောင်ရေး & ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကံကောင်းထောက်မစွာ Sundsvall-Holmes စီမံခန့်ခွဲ, သူတို့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒီမှာ.
ကားကိုယူပြီးသို့မဟုတ် Liden သို့မဟုတ် Kovland နေရာ carpooling တစ်ခု option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထို့နောက်ဘတ်စ်ကားယူ. နောက်ထပ်ဆင်းသင်သည်ဘတ်စ်ကားကြိမ်ရှာတှေ့နိုငျ “Lidenbussen” – လိုင်း 30.
လိုင်း 30 Sundsvall – Liden (Hammarstrand)
Dintur.se အပေါ် PDF ကို format ကိုသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအတွက် Liden ဘတ်စ်ကား.
လိုင်း 133 Sundsvall – မြင့်မားသောပင်လယ်
pdf format နဲ့ high ပင်လယ်ဘတ်စ်ကား.
PDF ဖိုင် format နဲ့အားလုံးအချိန်ဇယား
Holmbussen လိုင်း 28
Lidenbussen လိုင်း 30
မြင့်မားသောပင်လယ်ဘတ်စ်ကား လိုင်း 133
ခန့်မှန်းချက် 24-26/4:Låga halter av al- och almpollen, h&o... ဆက်ဖတ်ရန်